ओली सरकार: सफल कि असफल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १०, २०७३ सञ्जीव पोखरेल
काठमाडौं — ओली सरकार हामीबाट बिदा हुँदैगर्दा यसको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभाषबारे चर्चा हुन आवश्यक छ। यो जिम्मेवारी सधैँ 'प्रतिपक्ष'मा रहन रुचाउने स्वतन्त्र नागरिकबाट हुनुपर्छ र विश्लेषण सकेसम्म निष्पक्ष हुनुपर्छ –ता कि इतिहासले पक्षपाती भएर कसैको मूल्यांकन नगरोस्। भावनामा बहकिएर कसैले गलतलाई सही नभनिदियोस्।
सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा हिजो गरेको भाषण सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो नेपालमा अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा एउटा ऐतिहासिक सरकार निर्माण भएको रहेछ। यसको स्वाभिमानी सोच र असल प्रयासले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट सहजता र स्थीरतातर्फ उन्मुख गराएको रहेछ। सरकारका एकदुई प्रयास विपक्षीको असहयोगमा सफल हुन सकेनछन्। अन्यथा, ओली सरकारको सफलताको गाथा अत्यन्त गौरवशाली रहेछ।
प्रमको भाषण सकिन नपाउँदै एमालेका नेता, कार्यकर्ता वा एकादुई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी केपी ओलीलाई राजनेताको उपमा दिन तयार भइहाले। मिडियामा आएका समाचारलाई पत्याउने हो भने स्वयं पुष्पकमल दाहालले समेत हिजोको भाषणपछि उनलाई राजनेताको सम्मान दिइसकेका छन्।
यस आलेखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धी मानेका नाकाबन्दीको सङ्कटको सामना, मधेश आन्दोलनको बैठान, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सक्रियता र विकासनिर्माणका कामको सङ्गोपाङ्गो चर्चा गर्नेछु।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षीले अवरोध सिर्जना गरेर अमानवीय राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास गरे। संसद्‌बाट पुनर्निमाण प्राधिकरण विधेयक पारित गराउने क्रममा विपक्षीले गरेको अवरोध नेपालीले शायदै बिर्सन सक्लान्। यद्दपि, प्रतिपक्षीको हठको आलोचना गरिरहँदा प्राधिकरणको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल चयन गर्ने र यसका विधिविधान पार्टीलाई अनुकुल हुनेगरि निर्माण गर्ने एमालेको नियत पनि पुनर्निर्माणको असफलताको कारक रहेको कसैले बिर्सनु हुँदैन। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ चयन गर्ने कुरामा हठ गर्ने प्रतिपक्षीमात्र होइन, सरकारको नेतृत्व पनि हो –जसले अन्ततोगत्वा प्राधिकरणलाई कमजोर र असक्षम बनायो।
संसद् भवनको रोष्टममा उभिएर सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा पुष्पकमल दाहाल जति फिका देखिए सरकारको सफलता पुष्टि गर्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि त्यति नै असफल रहेका हुन्। आशा गरौँ इतिहासले यी दुबै नेताका दाबी कति सही र कति गलत थिए भन्ने प्रस्ट पार्नेछ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७३ १२:१९
आइओएमका पहिलो डिन शाहको निधन
श्रावण १०, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) का पहिलो डिन डा. मोइन शाहको निधन भएको छ । ८५ वर्षीय शाहको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार बिहान निधन भएको उनका आफन्त नेहाल शाहले बताए । उनी हड्डीलगायत रोगले ग्रस्त थिए ।
इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) का पहिलो डिन डा. मोइन शाहको निधन भएको छ ।
८५ वर्षीय शाहको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार बिहान निधन भएको उनका आफन्त नेहाल शाहले बताए । उनी हड्डीलगायत रोगले ग्रस्त थिए । रोगले च्यापेपछि उनलाई आइतबार अस्पताल लगिएको थियो । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
अमेरिका र मलेशियामा रहेका दुई छोरा काठमाडौं आएपछि शाहको इस्लामिक परम्परा अनुसार अन्त्यष्टी हुने छ । डा. शाहले आइओएमका साथै साउदी अरबको जेद्दा र इङ्ल्याण्डमा रहेर लामो समय काम गरेका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७३ १२:१८